Websiteka Markhaatiyaasha Yehowah (JW.ORG) Wuxuu ka Kooban Yahay
Websitekeenna Maxaa Laga Heli Karaa?
Ciise wuxuu raacayaashiisa ku yiri: ‘Iftiinkiinnu dadka hortiisa ha iftiimo, si ay shuqulladiinna wanaagsan u arkaan, oo ay Aabbihiinna samada ku jira u ammaanaan.’ (Matayos 5:16) Sidaas daraaddeed waan ka faaʼiidaysannaa farsamada casriga ah sida Internetka oo kale. Warbixin rasmi ah oo ku saabsan rumaysadka iyo hawlaha Markhaatiyaasha Yehowah waxaa laga helaa websitekeenna jw.org. Bal websitekan muxuu soo bandhigaa?
Jawaabta uu Kitaabku ka bixiyo suʼaalaha aad laysku weyddiiyo. Suʼaalaha nolosha ugu muhimsan oo dadku weligood weyddiiyeen baad heli kartaa. Matalan warqadaha Murugo iyo Rafaad May Dhammaan Doonaan? iyo Kuwii Dhintay Mar Kale May Soo Noolaan Doonaan? baa 600 oo luqadood ku diyaarsan. Turjumaadda Adduunka Cusub oo Kitaabka Quduuska ah oo lagu turjumay 130 luqadood in ka badan baadna websitekeenna ka dhex heli kartaa. Waxaana ku diyaarsan qormo kale oo ku saabsan Kitaabka sida buugga War Wanaagsan Ilaahay Ka Yimid! iyo majalladaheenna ugu dambeeya. Wargeysyadan qaar badan waxaa laga akhrin karaa oona laga dhegeysan karaa online. Waana la download gareysan karaa iyagoo ku diyaarsan qaabyada caanka ah sida MP3, PDF ama EPUB. Xitaa waad daabacan kartaa sidaad qof xiiseynayo luqaddooda ugu tustid! Luqado badan oo fara hadal ah baa lagu diyaariyay fiidiyowyo. Waxaad download gareysan kartaa akhris firfircoon oo Bibleka, riwaayado iyo muusika macaan ad goortaad doonaysid dhegeysan kartid.
Warbixin xaqiiq ah oo ku saabsan Markhaatiyaasha Yehowah. Warka ugu cusub iyo fiidiyowyo yaryar oo ka hadlaya hawlaheenna caalamiga ah baa lagu soo bandhigaa websitekeenna. Waxaana lagu soo bandhigaa arrimaha Markhaatiyaasha Yehowah iyo hawlaheenna gurmashada. Waxaad sii ogaan kartaa shirarkeenna soo socda iyo sidaad ula xiriiri kartid laamaheenna.
Isticmaalidda waxyaalahan baa suuraggeliyay inaan iftiinka runta ku ifino meelaha dunida ugu fogfog. Qaaradaha oo dhan dadka jooga buu iftiinkan anfacayaa xitaa qaaradda Antiarktis. Waxaan ku duceysanaa “in ereyga Rabbigu dhaqso u faafo” dunida oo dhan oo Yehowah la ammaano.—2 Tesaloniika 3:1.
Websiteka jw.org sidee buu dad badan u caawinayaa siday runta Kitaabka u ogaadaan?
Websitekeenna maxaad jeclaan lahayd inaad ka eegtid?
Waxaa jira websiteyo ay cadaawayaal sameysteen siday ururkeenna been uga faafiyaan. Kuwani waxay doonayaan inay dadka ka jiitaan Yehowah. Waa inaan ka leexano websiteyadan.—Sabuurradii 1:1; 26:4; Rooma 16:17.
Wadaag Wadaag Websitekeenna Maxaa Laga Heli Karaa?